European Union inovhara zviri pamutemo nzvimbo yayo yemhepo kune ndege dzeBelarusian
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » European Union inovhara zviri pamutemo nzvimbo yayo yemhepo kune ndege dzeBelarusian
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Belarus Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
European Council nhasi yasarudza kusimbisa matanho aripo ekudzvanyirira nekuda kwemamiriro ezvinhu muBelarus nekuunza kurambidzwa kwekuwandisa kwenzvimbo yemuchadenga yeEU uye nekuwana nhandare dzeEU nevatakuri veBelarus marudzi ese.
European Council inozivisa gumbeze rekurambidza ndege dzeBelarusian
Nhengo dzeEU dzinofanirwa kuramba mvumo yekupinda mukati, kubvisa kubva kana kupfuudza matunhu avo kune chero ndege dzinoshandiswa nevatakuri vemhepo veBelarusian
EU kurambidzwa kunouya mukumhanya kweRyanair kubira ndege
Nhengo dzeEuropean Union dzakatemera zviri pamutemo gumbeze kurambidzwa kune vese vanotakura mweya veBelarusian kupinda muchadenga cheEU. Kurambidzwa kwakazara kunouya mukusungwa kwemusungwa anopikisa Roman Protasevich nekusungwa kwehutongi hweBelarus mushure me Ryanair ndege dzakamutakura dzakabvutwa ndokumanikidzwa kumhara muMinsk musi waMay 23.
European Council yazivisa gumbeze danho rekurambidza nhasi, zvichitevera kubvunzana pakati pevamiriri vepamusoro veEU.
European Union nhengo dzenyika "dzichafanirwa kuramba mvumo yekupinda, kubvisa kana kuwedzera nzvimbo dzadzo kune chero ndege dzinoshandiswa nevatakuri vemhepo veBelarusian."
Kurambidzwa uku kunokanganisawo vafambisi vanotengesa zvigaro mundege dzinoshandiswa neimwe ndege, uye ichatanga kushanda pakati pehusiku (22:00 GMT), zuva rimwe chetero.
Kurambidzwa kwese-kweEurope kunouya mazuva maviri mushure mekunge European Union Aviation Safety Agency (EASA) yagadzirisa 'kurudziro' yayo yekuti vatakuri vanobva kublogi vadzivise Belarus murambidzo izere. EASA yakaburitsa "Safety Directive" ichiti hapana ndege dzeEU dzinofanira kupinda muBelarusian airspace kunze kwekukurumidzira.
Kubiwa kwendege kwaMay 23 Ryanair kwakatumira mafashama anoenderera mberi kuburikidza neindasitiri yekufambisa nendege. Ndege, iri munzira kubva kuGirisi kuenda kuLithuania, yakabiwa nekumanikidzwa kumhara muMinsk nekuda kwekutyisidzira kwebhomba. Pasina mubvunzo kutaura, hapana bhomba rakawanikwa mubhodhi, nepo mhedzisiro uye nguva ye'yambiro meseji 'zvichinyatso kunongedzera ku'inokosha mashandiro' akaitwa neBelarus KGB.
Pakarepo pakumhara kumanikidza paMinsk airport, vamiririri veBelarusian vakakwira ndege ndokusunga Protasevich aidiwa nehutongi hwaLukashenko nemusikana wake, mugari weRussia Sofia Sapega.